Isifiso sikaNgqongqoshe 'ngabathakhathi' | isiZulu
Isifiso sikaNgqongqoshe 'ngabathakhathi'
Kubulawe isalukazi ngesihluku eKZN
Kubulawe isalukazi emzini waso eThekwini
Zimkhalele osolwa ngokubulala isalukazi eKapa
Andile Moshoeshoe, ILANGA
Durban - Ugqugquzele ukusungulwa kwamakomidi azobhekana ngqo nezalukazi esezinemiqondo engasabambi kahle, uNgqongqoshe wezokuThuthukiswa koMphakathi KwaZulu-Natal, uWeziwe Thusi, ngoba ethi uzama ukunqanda ukubulawa kwazo ezindaweni zasemakhaya uma zinukwa ngokuthakatha.
NgoLwesibili lwesishingishane esibhubhise ezindaweni ezigudla ulwandle kubalwa neTheku, uThusi ubephume umkhankaso wokuvakashela izindawo ezahlukene eziseningizimu yeKwaZulu-Natal, kubalwa naseKokstad, eyovula izakhiwo zomphakathi, izikole zojahidada zikanokusho nokuyoxoxa nemiphakathi ukuba kube bamakomidi azogqugquzela ukwazana kwabantu.
EKokstad yilapho ekhulume khona eyokuvikelwa kwezalukazi ezisuke zisolwa ngokuthakatha kwazise kule ndawo esemngceleni weKwaZulu-Natal ne-Eastern Cape, ubhokile lo mkhuba - izalukazi ziye zitholwe zizihambela nje noma zihhema, besezisolwa ngobuthakathi, zibulawe.
OLUNYE UDABA:Kubulawe isalukazi emzini waso eThekwini
Lapha kukhulunywe kakhulu nge-Alzheimer okuyisifo sokukhohlwa, okuthiwa sihlasela kakhulu asebekhulile, abahlaselwa kakhulu nayisifo sikashukela - abanye abantu kuze kube sengathi balahlekelwa wimqondo.
Ethula inkulumo yakhe, uThisi phambi kwezinkumbi zabantu ezidele amakhaza zagcwala ithende, uthe kufanele kugqugquzelwe ukwazana nokuba imizi enezalukazi esezikhulile, yaziwe endaweni kuthi uma kukhona esitholwe sigcaluza singazi nanyaka abantu basisize basihambise emzini waso kunoba basibulale.
Kulo mcimbi uThusi uvule ngokusemthethweni isikole sojahidada esidle uR6 million. IMeya yaseKokstad, uBheki Mtolo, inikele ngomhlaba ongamahetha angu-10 ukuze umnyango wakhe isikhungu esizokuba yindawo yokondla amalungu omphakathi ahlwembpu.
Lapha kuzophekwa ukudla okuhlelekile kuphinde kuvuleleke namathuba emisebenzi kubantu bendawo.
Lesi sikhungo sizibizwa ngeCommunity Nutrition Centre (CNDC). Uhlelo lokwakhiwa nokusebenza kwaso kukotshelwe eBrazil, ekungelinye lamazwe anobudlelwano neNingizimu Afrika njengoba liwuzakwabo kwiBrics (Brazil, Russia, India, China neNingizimu Afrika) kodwa lubizwa ngePopular Restaurant phesheya kwezilwandle.
Wynberg - 09:35:26 AM TAXI UNREST in the central Wynberg area - SLOW MOVING TRAFFIC Ezinye zasemigwaqeni